निर्मला हत्या प्रकरणः एक सय बढी ब्यक्तिसँग सोधपुछ, तर खुलेन अझै तथ्य ! - Everest Dainik - News from Nepal
निर्मला हत्या प्रकरणः एक सय बढी ब्यक्तिसँग सोधपुछ, तर खुलेन अझै तथ्य !
कञ्चनपुर, भदौ २२ । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रहरीको नयाँ टोलीले अनुसन्धान थालेको दुई साता भएको छ । प्रहरीले निर्मलताको बलात्कार र हत्या कुन ठाउँमा भयो र हत्यामा कतिजना संलग्न थिए भन्नेबारे कुनै तथ्य फेला पार्न सकेको छैन ।
कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायउतले आफुले अनुसन्धान क्रममा सयजना भन्दा बढीसँग सोधपुछ गरेको बताएका छन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
शकास्पद कतिपयलार्य कागज गराएर छाडेका छौँ, कतिलाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडेका छैँ, उनले भने, शंकास्पद सबैभाथि सबै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।,
अहिलेसम्म कुनै ठोस तथ्या खुल्न नसेको उनले बताए । निर्मलाको शव साउन ११ गते भेटिएको थियो । घटना भएको उक महिनाभन्दा बढी भईसकेको छ । यस अवधिमा धेरै प्रमाण नष्ट भईसकेकाले अनुसन्धानमा जटिल्ता उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।